Semalt: कसरी र किन तपाईंको प्रणालीलाई मालवेयरबाट जोगाउने
के तपाईंलाई थाहा छ उपसर्ग मल (मालवेयर जस्तै) को अर्थ स्पेनी सहित सबै ल्याटिन भाषाहरूमा नराम्रो हुन्छ? यसले तपाईंलाई धेरै बताउँछ। मालवेयर वा मालिसियस सफ्टवेयर साइबर अपराधीहरूले विनाशकारी कम्प्युटर प्रयोगकर्ताहरूको विनाशको लागि प्रयोग गर्दछ। तपाईले मालवेयरको बारे सोच्न सक्नुहुन्छ व्यक्तिगत डेटा फिश गर्न प्रयोग गरिएको इन्टुसभिव प्रोग्राम - लगईन विवरणहरू + पासवर्डहरू, क्रेडिट कार्ड विवरणहरू, बैंक जानकारी, सामाजिक सुरक्षा नम्बर - जुन त्यसपछि चोरी (पहिचान चोरी), पैसा र अन्य भयानक गतिविधिहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ। मालवेयर कुनै पनि रूप मा हुन सक्छ। यो ट्रोजन घोडा, भाइरस, ransomware, गँड्यौला वा स्पाइवेयर हुन सक्छ।
Artem Abgarian, को वरिष्ठ ग्राहक सफलता प्रबन्धक द्वारा परिभाषित माथिको निर्देशन पालना Semalt , र आफ्नो निजी जानकारी सधैं सुरक्षित हुनेछ।
मालवेयर तपाइँको बिरूद्ध कसरी प्रयोग हुन्छ?
त्यहाँ धेरै तरिकाहरू छन् जुन मार्फत ह्याकर वा साइबर अपराधीले मालवेयरलाई मुक्त गर्न सक्दछन्। सब भन्दा साधारण तरीका भनेको फिसि email ईमेल पठाउनु हो। यो ईमेल हानिरहित देखिन्छ, तर यसले प्राय: लिंक वा एक्जिक्युटेबल फाइल समावेश गर्दछ जुन यदि क्लिक गरिएको छ भने तपाईंको कम्प्युटर प्रणालीमा मालवेयर स्थापना गर्दछ।
एकचोटि यो मालवेयरले तपाईंको पीसीमा फेला पारेमा, यसले तपाईंको डाटा एन्क्रिप्शन र कमजोरीहरूको लागि सुरक्षा प्रणालीको जाँच गर्दछ। यदि प्रणालीमा कहीं त्रुटीहरू छन् भने, मालवेयरले आक्रामक रणनीतिहरूको संयोजनको प्रयोग अपरेसनमा बाधा पुर्‍याउँछ जब निजी डेटा चोरी गर्न। उदाहरण को लागी, तपाइँको ब्राउजरले धेरै ट्याबहरू खोल्न सक्दछ यदि तपाइँ त्यसो गर्न चाहानुहुन्छ। कहिलेकाँही, तपाईले भूत अडियो सुन्नुहुन्छ (ध्वनी क्लिपहरू ट्याबहरूमा प्ले गर्दै जुन तपाईंले स्वेच्छाले खोल्नुहुन्न)। मालवेयरले कसरी तपाईंको पासवर्डहरू जान्छ? ठिक छ, तिनीहरू डाटा क्याप्चरिंग प्रविधिको प्रयोग गर्दछ जसलाई किलोगिंग भनिन्छ। यो विधिले तपाईले सबै कुञ्जीहरू ट्र्याक गर्दछ जुन तपाईले खातामा लग ईन गर्दा प्रेस गर्नुहुन्छ। त्यस्तै मालवेयरले तपाइँको सामाजिक सुरक्षा नम्बर, पिन, र पासवर्डहरू पहिचान गर्दछ।
मालवेयरको खतरा वास्तविक छ। वास्तवमा सफ्टवेयर पत्ता लगाउन गाह्रो भइरहेको छ जसले संकेत गर्दछ कि पहिचान चोरी र अन्य साइबर अपराधका घटनाहरू बढ्दो हुन सक्छ। तर नडराउनुहोस्। यस खतराबाट आफूलाई जोगाउन धेरै तरिकाहरू छन्।
एक मालवेयर घुसपैठबाट कसरी बच्ने
यो सुरक्षित खेल्न गणना गर्दछ र सतर्क हुन। यो दिमागमा राख्दै, निम्न सुझावहरूले तपाईंलाई हानिबाट टाढा राख्नु पर्छ:
लिंकहरू वा खुला संलग्नकहरू वा ईमेलबाट कार्यान्वयन योग्य फाइलहरूमा क्लिक नगर्नुहोस् जसका प्रेषकलाई तपाईं चिन्नुहुन्न वा नियमित रूपमा कुराकानी गर्नुहुन्न।
एन्टीवायरस सफ्टवेयरको नयाँ संस्करण डाउनलोड गर्नुहोस्, स्थापना गर्नुहोस् र अपडेट गर्नुहोस्, एन्टी स्पाइवेयरले त्यसपछि फायरवाल सेट अप गर्नुहोस्। एन्टीवायरस सफ्टवेयरको क्र्याक संस्करणहरू प्रयोग नगर्नुहोस्।
ब्राउजरको स्वत: बचत सुविधा प्रयोग नगर्नुहोस्। यदि तपाइँ पासवर्ड याद गर्न को लागी ब्राउजर द्वारा पदोन्नति गरिएको छ 'कहिले हुँदैन'। तपाईंको पीसी लक गर्नुहोस् जब तपाईं यसलाई प्रयोग गरिरहनु भएको छैन।
यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईले आफ्नो पीसी, ल्यापटप वा ट्याब्लेटमा प्रोग्रामको सबैभन्दा नयाँ संस्करण प्रयोग गर्नुभयो। यो जस्तो हो, विकासकर्ताहरूले नराम्रो साथीहरूबाट टाढा राख्नको लागि नयाँ सुरक्षा उपायहरू समावेश गर्दछ।
आफैलाई मालवेयरको अर्को शिकार हुन नदिनुहोस्। कहिलेकाँही तपाईंको एन्टिभाइरसले 'खतरा पत्ता लगाईएको' सन्देशको साथ विन्डो पप गर्न सक्दछ। यदि त्यसो भयो भने तपाईंको ईमेल वा पाठमा पठाइएको लिंक खोल्नुहोस्। यसलाई उपेक्षा गर्नुहोस्। तपाईं सुरक्षित हुनुहुनेछ।